राति मस्त निद्रामा सुत्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो गर्नुहोस् - हिमगाथान्यूज
Home टिप्स/जानकारी राति मस्त निद्रामा सुत्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो गर्नुहोस्
द्रव्य पदार्थले भरिएका सामग्री पनि सुत्ने कोठामा नराख्नुहोस् । अर्थात राखी हाले पनि अत्यन्तै कम राख्नुहोस्, जस्तै दुग्ध, शर्बत तथा रक्सीको बोतल । (एजेन्सीको सहयोगमा)
Previous articleग्यास्ट्रिकले हैरान हुनु भएको छ, यसरी गर्न सकिन्छ आयुर्वेदिक उपचार
Next articleके कफी स्वस्थकर छ ?